Mapisarema 35 Minamato Yekupokana Nevavengi Vakaipa | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Mapisarema 35 Minyengetero Yekupesana Nevavengi Vakaipa
Mapisarema 35 Minyengetero Yekupesana Nevavengi Vakaipa
Mapisarema 35: 1
Kanda mhosva yangu, Jehovha, navanokakavara neni: Rwa navanorwa neni.
Nhasi tichave tichitarisa kumapisarema 35 munamato mapikiro kune vavengi vasina mhosva. Izvi minamato yemunamato ndeavo vakakuvadzwa na Muvengi pasina chikonzero, avo vakadzoserwa zvakaipa nekuda kwezvakanaka zvavakaratidza, ivo vakaitirwa zvakaipa nevanhu vakaipa. Kana iwe ukawira mune chero weyi chikamu nhasi, saka iwe wauya kunzvimbo chaiyo. Kuburikidza neiri pisarema makumi matatu neshanu munamato wemunamato, Mwari vachakupa ruramisiro pamusoro pevadzivisi vako vese muzita raJesu.
SevaChristian, tinofanirwa kunzwisisa kuti muvengi wedu chaiye ndiDhiabhori, anoshanda chete kuburikidza nemidziyo yemunhu inoiswa vanhu. Iyi midziyo yemunhu inoita madhimoni kuita zvakaipa nevanhu vasina mhosva. Hama dzangu dzinodikanwa, pane zvakaipa munyika ino, haufanire kumutsa dhiabhori kuti akuuraye, chokwadi chekuti iwe uri kristu chikonzero chakakwana chekuti gehena ripesane nehupenyu hwako. MunaMateo 16:18, Jesu akadaro 'masuwo egehena haangakundi kereke'. Izvi zvinongoreva kuti kana iwe uri mwana waMwari, magedhi egehena anogara achikwikwidza nekwauri kuenda. Sezvaunobata iri pisarema 35 remunamato rinongedzera vavengi vasina mhosva nhasi, masuwo ese egehena achapfugama pamberi pako muzita raJesu.
Mapisarema 35 munamato mapoinzi ari zvehondo munamato mapoinzi. Iwo munamato unonongedzera kukuisa iwe sewakristu mune inogumbura mhemo. Ini ndinogara ndichiudza vatendi kuti musarega dhiabhori achikurwisai musati mazvidzivirira, panzvimbo iyoyo, garai makamuka pane zvomweya, ivai munamato wekucherekedza murume, mutendi anonamata nguva dzose. Kuburikidza neminamato isingachinjiki tinochengeta hupenyu hwedu hwechikristu pamoto uye kana tave pamoto, hapana muvengi achatikunda. Uyu ndiwo munamato wangu kwauri nhasi, paunopinda uyu pisarema remunamato makumi matatu neminamato, zvakaipa zvese zvevakaipa pamusoro pehupenyu hwako zvinodzokera kumisoro yavo muzita raJesu. Avo vese vakakuitira zvisiri izvo vachatongwa naBaba vako vari Kudenga muzita raJesu. Kuburikidza nemunamato uyu unongedzera, muvengi wese muhupenyu hwako achapfugama muzita raJesu. Ndinokukurudzira kuti uite pisarema iri makumi matatu neminamato munamato nekutenda uye nemoyo wako wese. Unokunda muzita raJesu.
Mapisarema 35 Minamato yeMinamato
1. Baba, rwira mhosva yangu kune avo vanopokana neni muzita raJesu
2. Baba simuka murwe nevanorwa neni muzita raJesu
3. Simuka O Ishe uye mundidzivirire kubva kune vakanyanya kundisimbisa muzita raJesu
4. Baba vhuraiwo pfumo, muvasiye nzira yevanonditambudza muZita raJesu
5. Baba, ndinoparidza nhasi kuti ndimi ruponeso rwangu muzita raJesu
6 .. Ngavanyadziswe vanyadziswe vanotsvaga mweya wangu muzita raJesu.
7. ngavadzoserwe shure uye vaunzwe kunyongana vanofunga kukuvara kwangu muzita raJesu.
Ngakuve sehundi pamberi pemhepo, uye mutumwa waIshe ngaadzingirire muzita raJesu.
9. Nzira yavo ngaive yakasviba uye inotsvedza: uye mutumwa waIshe ngaavatambudze muzita raJesu.
10 kuparadzwa ngakumuwire iye nokusaziva; uye mumbure wake waakaviga ubate iye: Mukuparadzwa chaiko, ngaawire muzita raJesu.
11.Vanyadziswe uye vanyadziswe ivo vanofarira kurwadziswa kwangu: ivo ngavapfekedzwe nenyadzi uye vanyadziswe vanozvikudza pamusoro pangu muzita raJesu.
12 Ngavadanidzire, uye vafare, ivo vanofarira mhosva yangu yakasimba;
13. Vanondikomborera ngavaropafadzwe, uye ani naani anondituka ngaatukwe muzita raJesu
14. Rega mutemo wekusarura kweumwari utange kushanda kwandiri zvakanaka, muzita raJesu.
15. Chero dhimoni rimisikidzwa munzvimbo yangu yebasa uye bhizinesi, kurwisa kufambira mberi kwangu, kupaza uye kuparadzwa, muzita raJesu.
16. Yese nhare yedhiabhori pamusoro pehupenyu hwangu, ngaiputswe izvozvi, muzita raJesu.
17. Ini ndinokoromora pasi nhare yekunze iri kushanda inopesana nekufambira mberi kwangu, muzita raJesu.
18. Chero satanic akaronga kundinyadzisa, anyungudwe nemoto, muzita raJesu.
19. Unganidzo imwe neimwe yevasingadiwe Mwari, kwandiri kana yemweya, vaparadzirwe dongo, muzita raJesu.
20. Ndinodzima chirevo chose chakauya kuzorwa neni muvushe hwerima, muzita raJesu.
21. Ndinodzima mhosva dzose dzakauyiswa kwandiri murima reumambo, muzita raJesu.
22. Ndinodzima kupomerwa kwese kwandakauyirwa muushe hwerima, muzita raJesu.
23. Ini ndinobvisa uye ndinobvisa kutonga kwese kwandakaitirwa muumambo hwerima, muna
24. Ndinodzima sarudzo yese yakapfuudzwa pandiri muumambo hwerima, muzita raJesu.
25. Ndinodzima kutongwa kwese kwakapfuura pandiri murima reumambo, muzita raJesu.
26. Ini ndinoremadza maoko akaipa kuti ndiite mukurumbira wavo muzita raJesu.
27. Ini ndinoshatisa mashandiro emuvengi akapihwa hupenyu hwangu, muzita raJesu.
28. Ini ndinopaza zvese satanic kuedza kwomuvengi akapihwa zvinopesana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.
29. Kubata kwese kwomuvengi pakubudirira kwangu, gamuchira kutadza kwakapetwa, muzita raJesu.
30. Hondo yega inorwiwa nehupenyu hwangu nevavengi, gamuchira nyadzi mbiri, muzita raJesu
Previous nyayaMapisarema 91 munyengetero Pfungwa dzeDziviriro
inoteveraMapisarema 121 Kunamatira Kudzivirirwa uye Divine rubatsiro
frédéric Mbudzi 30, 2020 Na3: 47 pm
puisque c'est en Esprit, en zvirevo.
20 minamato ine simba Pamusoro pehupombwe
30 Sungano Kuputsa Minyengetero minamato
Hondo minamato Kudzosera zvakaipa Zvakaipa